१३ वर्षको उमेरमा बने बुवा, १५ वर्षीया गर्लफ्रेण्डले जन्माइन बच्चा ! - The First Nepali Digital Newspaper from Australia (Ausnepal news)
१३ वर्षको उमेरमा बने बुवा, १५ वर्षीया गर्लफ्रेण्डले जन्माइन बच्चा !
प्रकाशित मिति: १३ माघ २०७५, आईतवार
लन्डन। सन् २००९ मा बेलायतमा १३ वर्षीय बालक सबैभन्दा कम उमेरमा बाबु बनेकोे कुराले सारा बेलायतमा हंगामा भएको थियो। उनकी १५ वर्षकी गर्लफ्रेण्डले बच्चा जन्माएकी थिइन। यो घटनामा बेलायतका प्रधानमन्त्रीले समेत बयान दिन परेको थियो। उनले त्यहाँका अरु सबै परिवारलाई सावधान गराएका थिए।
इस्टबोर्न शहरमा बस्ने एल्फी स्कुलमा पढ्दै गरेको बेलामा उनको भेट १४ वर्षीया सेण्टलसँग भएको थियो। ती दुवै जना एकदमै नजिक भए। त्यसको परिणाम स्वरुप सेण्टलले मैसी नामकी छोरी जन्माइन।
त्यो समय बेलायतका चर्चित पत्रिका ‘गार्जियन’ ‘द सन’ लगायतले एल्फिलाई सबै भन्दा कम उमेरको पिता घोषणा गरेका थिए। सारा दुनिया एल्फीलाई सबै भन्दा कम उमेरका पिता मानिरहेका थिए। तर केही वर्ष पछि डिएनए टेस्ट गर्दा उनी सेण्टलले जन्माएको बच्चीको बाबु नभएको थाहा भयो।
२००९ मा एल्फी र सेण्टलले एक स्वस्थ बच्ची जन्माएका थिए। उनीहरु दुइ वर्षसम्मसँगै बसे तर एल्फीलाई आफू त्यो बच्चीको बाबु नभएको थाहा थिएन। यी दुई वर्षमा अरु दुई जना किशोरले आफूहरु त्यो बच्चीको बाबु भएको दाबी गरेका थिए।
त्यसपछि एल्फीकी आमा निकोलाले उनीहरुको डीएनए टेस्ट गराइन्। एल्फी जसले दुई बर्षदेखि ती बच्चीलाई आफ्नो मानेका थिए। उनी ती बच्चीको बाबु नभएको टेस्टमा थाहा भयो। यो सबै कुरा थाहा भैसकेपछि सेंटल आफ्नी बच्चीलाई लिएर आफ्नो परिवारको घर गइन् र एल्फी पनि दुःखी हुँदै घर गए।
एल्फीको रिपोर्ट नेगेटिभ आएपछि अर्काे टेलर बेकर नामक व्यक्तिको बारेमा थाहा भयो। जो ती बच्ची जन्मिएको बेलामा १३ वर्षको थिए। उनले सेण्टलसँग पहिलो पटक भर्जिनिटी गुमाएको र त्यो नै जीवनको सबै भन्दा ठूलो गल्ती भएको बताए।
सेण्टलको धेरै युवकसँग सम्बन्ध हुने गरेको टेलरले बताए। त्यस्तै अर्का एकजना १६ वर्षीय रिचर्ड गुडसेल नामक किशोरले पनि आफू ती बच्चीको बाबु भएको बताएका थिए। परिवार र साथीहरुले पनि ती बच्चीका आँखा दुरुस्तै रिचर्डसँग मिल्ने बताए।
चार वर्ष पहिला एल्फी १८ वर्ष पुगेका थिए। उनले ‘द सन’ नामक अखबारलाई दिएको अन्तरवार्तामा सेण्टलसँग सम्बन्ध बनाउनु नै उनको ठूलो गल्ती भएको बताएका थिए। यही कारणले उनले स्कुल छोड्न पर्याे र कँही काम गर्न पनि सकेनन्।
काठमाडौं । कोरोना महामारी संक्रमण जीवजन्तुमा पनि देखिन थालेको छ। अमेरिकको न्युयोर्कस्थित ब्रोङ्कस चिडियाघरमा […]
सेल्फी खिच्ने बानी छ ? तपाईंलाई लाग्न सक्छ यस्तो रोग
काठमाडौं । कुनै बेला यस्तो थियो जतिखेर किशोर किशोरीहरु चौरमा खेल्दा खेल्दै खेरी घुडामा चोट लागेर वा साइकलबाट […]
काठमाडौं । अस्पतालमा जन्मिएका एक नवजात शिशु देखेर चिकित्सकहरु नै चकित भएका छन् । शिशुको तस्वीर अहिले […]
कोरोनाबाट बाजुराकी दुई वर्षे बालिकाको मृत्यु, मृतकको संख्या ८ पुग्यो
नेपालमा थप १६६ जनामा कोरोना संक्रमण, संक्रमितको संख्या १५६७ पुग्यो
दुई वर्षीया बालिकाको आइसुलेसनमै ज्यान गयो
अध्यावधिक नक्सा राख्नका लागि संविधान संशोधन विधेयक पेश